Qorshaynta dhul-beereedka - Geofumadas
Abriil, 2015 Geospatial - GIS, Maamulka Land
Qorshaha Territorial Territorial waa aalad loo adeegsado joogtaynta isticmaalka kheyraadka dabiiciga ah. Sanado badan dhulkii Peru wuxuu ku noolaa hoos imaadka
macquulka ah in sida ugufiican looga faa iideysto kheyraadka dabiiciga ah, mararka qaar sababa saameyn xun oo ku timaadda deegaanka iyo saldhigga waxsoosaarka ee dalka, waxay sidoo kale soo saaraan habab horumarineed oo aan isku habeysaneyn. Tan waxaa badanaa u sabab ah maqnaanshaha u dhexeeya siyaasadaha qaranka iyo maxalliga oo leh saameyn dhul iyo maqnaansho aragti wadaag ah oo leh shuruudaha isu dheellitirka iyo joogteynta.
Si looga fogaado xaaladaha sida ay lagama maarmaan tahay in la horumariyo qaabab u leedahay shuruudaha lagama maarmaanka u ah horumarinta isku dheeli tiran ee mustaqbalka ee dhulka.
Waxaan fahamsanahay dhulka sida meel bannaan oo ka kooban ciid, geyi, domain badda iyo hawada, taas oo xidhiidhka bulshada ee horumarinta, dhaqaalaha, siyaasadda iyo dhaqanka u dhexeeya dadka iyo deegaanka dabiiciga ah.
Post Previous«Previous georeference jaleelada
Post Next GIM-da International Español, waxay ku sii socotaa guul wacanNext »